UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOKUTHENGA KWI-Australia | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUNDWENDWELA iAustralia, Ukufudukela kwezoqoqosho ngokutyala imali yokuhlala eAustralia ngokutyala imali eAustralia, ukuhlala ngokutyala imali eAustralia
Indawo yokuhlala ngoTyalo mali lwaseAustralia kunye neGolden Visa
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho e-Australia:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia
● Ubummi ngotyalo-mali oluvela e-Australia
● IVisa yegolide e-Australia
● Ipasipoti yesibini evela e-Australia
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia ngokutyala imali nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali e-Australia Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eOstreliya kunye nabarhwebi beepropathi zokuHlala ngokuThengisa izindlu eAustralia basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eAustralia kubonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala imali eOstreliya, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eAustralia, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eOstreliya, ukuhlala kwakhona kwesibini ngokutyala imali eOstreliya, ukuhlala kubini ngokutyala imali e-Australia, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala imali e-Australia. Ukuhlala isigxina ngotyalo-mali e-Australia, ukuhlala okwethutyana ngotyalo-mali e-Australia, Ukuhlala kwakhona ngezikimu zotyalo-mali e-Australia, Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali e-Australia, Ubumi ngokutyala imali e-Australia, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali e-Australia, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali e-Australia, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali e-Australia, Ubumi bobabini ngotyalo-mali e-Australia, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala imali e-Australia, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngokutyala imali e-Australia, iinkqubo zoBumi bezoqoqosho e-Australia, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali e-Australia, Ubumi ngezikim zotyalo-mali e-Australia ipasipoti yesibini e-Australia, iipasipoti zesibini e-Australia, inkqubo yokundwendwela yesibini e-Australia, ipasipoti yesibini e-Australia, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini e-Australia, ipasipoti yesibini yase-Australia, ipasipoti yesibini ngokutyala imali e-Australia, ipasipoti yesibini yokuba ngummi e-Australia, Isikim sepasipoti yesibini e-Australia, iskim sepasipoti yesibini e-Australia, i-visa yegolide e-Australia, ii-visa zegolide e-Australia, iinkqubo ze-visa zegolide e-Australia, inkqubo ye-visa yegolide e-Australia, i-visa yesibini yegolide e-Australia, inkqubo yesibini yegosa yase-Australia, i-visa yegolide ezimbini e-Australia, ubumi kunye ne-visa yegolide e-Australia, ukuhlala kunye ne-visa yegolide e-Australia, ubumi be-visa obugolide e-Australia, isikimu se-visa segolide e-Australia, izikimu ze-visa zegolide e-Australia.
"1 ziyeke izisombululo" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala imali e-Australia ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci e-Australia lokuHlala kwakhona ngokutyala: AUD 1,500,000
Intshayelelo iAustralia kunye nokuhlala ngokuTyala
Funda ngakumbi ngeAustralia
I-Australia sisizwe esikholelwa ngokungathandabuzekiyo kwaye likhaya kuluhlu olubanzi kakhulu loluntu kunye nothungelwano.
Kwi-Aussies, umntu wangaphandle liqabane ongakhange udibane nalo ngoku. Inqanawa yamaqabane yintliziyo ewayo yomphefumlo wase-Australia- yenzelwe zonke iinjongo kunye nenjongo yoluntu. I-Aussies ixabisa ukuba ngabahlobo abadala kunye nabamelwane, hayi abantu ababaziyo kuphela. Kubantu base-Australia, oku kugxininiswa kwinqanawa yomlingane kwenza ukukhanya, ukumema, kunye nokuba ngubani na onokuthi abe liqabane. Ukusuka kwisanti ebomvu yaseUluru ukuya kude namanzi eGreat Barrier Reef kunye nezityalo ezinamahlathi atyebileyo, iAustralia iyahlonitshwa ngeziganeko ezithandekayo zeplanethi-ke ayothusi mntu ukuba abantu base-Australia bathanda ukuba ngaphandle. Le nzondelelo ngendalo ibaleka ngokunzulu ngemithambo yase-Australia, kwaye iyaxhonywa kwiziseko zeseti yamava esizwe; ubudlelwane obunolwazi nomhlaba bebusisiseko kwinkcubeko yama-Aboriginal ngaphezulu kweminyaka engama-50,000 XNUMX.
Ngamaxesha athile ubomi bendalo buthetha ukuba ungadada ngomnenga kangangenyanga enye kunye nemanta ibethe oku kulandelayo. Nangona kunjalo, abantu bendawo banomdla wokuphanda iipatiyo zabo, ngokunjalo. AbakwaSydneyiders bayakuxabisa ukudada kolwandle ekuzeni kokusa, iiCanberrans zithatha ukuphela kweeveki ngebhayisikile ejikeleze echibini, kwaye iPerth's King Park lolona khetho lukufutshane kwipikniki. Iseti yamava e-Australia inefuthe elinamandla kwindlela yayo yokuphila namhlanje, kwaye amabali okuqala e-Australia kunye namaxesha amaninzi anendawo anamaqela abantu base-Aboriginal kunye neTorres Strait Islander. Iilwimi zabo, iindlela zokuqiqa, kunye nemilo yabo zezona ndawo zihlala zikho emhlabeni, eziqala emva kweenkulungwane.
Fumana intshayelelo kwindlela yokuphila yesiqhelo yama-Aboriginal ngeNdwendwe yeXesha laseX eSydney, okanye ushukume kwisingqi saseMdaniso, imbambano yomdaniso woluntu waseOstreliya ebibanjelwe eSydney Opera House.
Ubuninzi beenkcubeko zase-Australia kunye neendidi ezahlukeneyo ziyaqhubeka nokukhula njengabantu abavela kwihlabathi liphela baye batshona kwindawo ezihlekisayo zesizwe nakwiidolophu zalapha. Namhlanje, indibaniselwano etyebileyo yase-Australia yeziseko, intlalo kunye nothungelwano zichaphazela yonke into ukusuka kukutya esikutyayo ukuya kwiminyhadala esabelana ngayo. Nokuba kukutya okanye ukutya, ukubhiyozela amaqabane, usapho kunye nenethiwekhi ebanzi ejikeleze itafile eqhelekileyo yinto ebalulekileyo kwinkcubeko yase-Australia.
Ezinye iindlela zokudibana nokupheka e-Australia azinakuphikiswa. Ukusuka kwizidlo zasekuseni ze-bistro ukuya ekutyeni okutyayo ngaselwandle kunye nokutya okuphezulu, ukupheka kwase-Australia kuxuba ukulungiswa kwendawo kunye neempembelelo ezivela kuyo yonke indawo ukwenza into ekhethekileyo. Ukuthatha inkuthazo kwimeko yendalo esingqongileyo isebenza ngokufanelekileyo kwiziselo ezinqwenelekayo zaseOstreliya, ngokunjalo. Ngenani elikhulu leewine ezikwiindawo ezingama-65 ezithandekayo zewayini, kunye nokuqhushumba kwiindawo zokucoca iingcibi kunye nemisebenzi yokubhotela ubugcisa, uninzi lwabantu base-Australia basebenzisa i-botanicals yalapha ukwenza iwayini, utywala kunye nomoya obonisa imeko yabo yokusingqongileyo.
Ukunika umthendeleko okanye isiselo ekuhlanganiseni abantu abatshatileyo kunye neendawo ezimangalisayo-nokuba uyayithanda na iivenkile zaseAsia ezantsi kwendlela yaseMelbourne okanye wonwabele ipleyiti yamaGrike kolunye lolwandle, uninzi lolwandle -yindlela yokwenene yaseAussie. Ufumana ntoni xa ubhangisa indlela yokuphila yokuncoma indalo kunye nonxweme olothusayo? Inkcubeko elunxwemeni lolwandle, ngokucacileyo. Abantu base-Australia bafumana iindlela ezingenakubalwa zokuqalisa izihlangu zabo kwaye benze olona lwandle lwabo lubalaseleyo, nokuba lolwandle, ukuloba, ukuhamba ngenqanawa, ukupiknana, ukwabelana ngomjikelo weqakamba wolwandle, okanye ukufunxa nje ukukhanya kwemini.
Unokufumana izinto zeli candelo lolwandle kuyo nayiphi na into, xa iiAussies zikude kumaza. Ixesha elininzi, le nkcubeko inefuthe kuyo yonke into ukusuka kumculo wase-Australia ukuya kwiinkqubo zeTV zabantwana. Akunjalo nje malunga nolwandle lwase-Australia, nangona kunjalo. Indawo engaphandle yaseOstreliya ilikhaya kwimiboniso eyahlukeneyo, imimangaliso eqhelekileyo engenakubalwa, kunye nokunxulumana okunzulu nenkcubeko kunye nothungelwano lwama-Aboriginal. Ukusukela imvakalelo yamava kunye nothando lwangaphandle lokutya ngendlela yokuphila yase-Australia, uya kufumanisa uninzi lweAussies ngaphandle kwemimandla yasezidolophini ethatha umoya wendalo kunye nesibhakabhaka esineenkwenkwezi ngorhatya lothungelwano lwephondo lwase-Australia kunye nokuqaqamba okuphuma ngaphandle. Ukuhlala e-Australia kuthetha ukufumana amathuba amaninzi; luhlanga lolutsha, olunenkcubeko eyahlukeneyo, kwaye luvulekile noqoqosho oluhlala lukhula.
Ulwaneliseko lobuqu lwase-Australia kunye nobungangamsha obuqhelekileyo obungenakuthelekiswa nanto benza ukuba ibe yeyona njongo ikulungeleyo ukuba ukhe wacinga ukuphucula ikamva lakho. I-Australia sisizwe esifanelekileyo kubantu abathanda ukuxabisa ubomi kwaye, kodwa ke kufuneka baphile kwisizwe esisebenzayo kunye nesopha. Yaziwa ngendlela yayo yobomi evumayo, i-Australia ijoyina ubuchule kunye nokuqinisekisa ubunyani bezizwe ezisemantla Yurophu kunye nejoie de vivre kunye nokuzimisela kwimpumelelo exhaphakileyo kumazwe akumazantsi.
Iindawo ezisisiseko zasezidolophini zibonelela kulawulo olubanzi, umsebenzi, kunye nokuzilolonga kwimozulu evulekileyo nenamagumbi (ubukhulu babantu abungaphezulu kokuluncedo, kwanasesixekweni). Kwakhona, iidolophu kunye neendawo ezisezidolophini zihlala zijikelezwe kukuqaqamba kwendalo yase-Australia: ulwandle oluhle, ulwandle olusondele ngokwaneleyo, kunye neendawo ezingenamda kunye neendawo ezibonakala ngathi zivela kwindalo eyahlukileyo!
Ostreliya kulapho abantu abavela kuyo yonke indawo kwihlabathi jikelele banokudibana bahlala kwilizwe elihambele phambili.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuhlala ngokuTyala imali e-Australia
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia
Imirhumo eyongezelelweyo visa yegolide ye Ostreliya
Indawo yokuhlala ngokutyala imali e-Australia
I-Subclass 888 (esisigxina) iVisa
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala imali e-Australia
Emva kokwanelisa ngaphezulu kweemfuno zokuhlala emva kweminyaka emi-4.
Emva konyaka omnye ubambe indawo yokuhlala esisigxina.
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseOstreliya
Iinketho zotyalo mali ze Indawo yokuhlala ngokutyala imali e-Australia
Kutheni ukuya kubuhlali ngokutyala imali e-Australia
I-Australia lilizwe loqoqosho lwe-12th ngobukhulu emhlabeni, olugcine ukukhula koqoqosho okuzinzileyo phantse iminyaka engamashumi amathathu. Umgangatho wayo ophezulu wokuphila, ubuhle bendalo eyahlukileyo neyodwa, kunye nokuzinza, nokuphila okukhuselekileyo kuyenza indawo ekumgangatho ophezulu kwabo bafuna ukuhamba. Isicwangciso sokuhlala selizwe esinegolide sinemigaqo ethe ngqo kwaye ichazwe kakuhle kwaye ungabandakanya amalungu osapho lwakho kwisicelo sakho ngaphandle kokongeza imali yakho yotyalo-mali.
Ukufudukela kosapho e-Australia
Unokongeza izibonelelo zezindlu zase-Australia kwiqabane lakho nakubantwana ukuya kuthi ga kwi-18 yeminyaka. Abantu abadala abaxhomekeke ngaphezulu kweminyaka eli-18 banokufaka isicelo sabafundi abasisigxina okanye abantu abakhubazekileyo.
Indawo yokuhlala ngenkqubo yotyalo mali e-Australia
Inkqubo yokuhlala e-Australia ngokutyala imali ifuna amava angaphambili, izakhono kunye neziqinisekiso. Uya kudinga ukungenisa izakhono zesiNgesi, ishishini okanye amava olawulo lotyalo-mali, kunye nokuzinikela kokwenyani kutyalo-mali e-Austria. Kuya kufuneka uhlale e-Australia ubuncinci iminyaka emibini kwiminyaka emihlanu. Inkqubo ivulelekile kubafakizicelo abangaphantsi kweminyaka engama-55, nangona le mfuno isenokurhoxiswa kubafaki-zicelo abasemagunyeni base-Australia bayithatha njengenzuzo kakhulu. Ingeniso kutyalo-mali e-Australia ixhomekeke kwirhafu ngokuhambelana nomthetho werhafu wase-Australia.
Imfuno yemali yeOstreliya
Kuya kufuneka utyale ubuncinci i-AUD 1.5 yezigidi kwaye ugcine olu tyalo mali ubuncinci iminyaka emi-4 ukuze ufake isicelo se-visa yotyalo-mali lweshishini. Igalelo lakho kufuneka limiselwe kwangaphambili ngurhulumente welizwe apho utyalo-mali lwenziwe khona. Wena neqabane lakho kufuneka nibonise i-AUD 2.25 yezigidi zeasethi yomntu iminyaka emi-2.
Uqeqesho lwe-AUD 5 yezigidi kunye ne-15 lezigidi zoqeqesho lotyalo-mali olongezelelweyo lukwachazwa njengenqanaba eliphezulu lenkqubo yokuhlala kubatyali mali. Ngokubanzi, kokukhona uphakamisa igalelo lakho, kokukhona kuya kubakho isicelo sakho.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali e-Australia
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo mali baseAustralia kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha eOstreliya ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo e-Australia ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela e-Australia, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela e-Australia kunye namanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngenxa yotyalo-mali oluvela e-Australia okanye i-Visa yaseGolide evela e-Australia okanye ubummi ngotyalo-mali oluvela e-Australia okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zotyalo-mali kwiarhente ethengisa izindlu nomhlaba ezivela e-Australia, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani Ostreliya okanye elunxwemeni, izibonelelo zabasebenzi e-Australia nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi e-Australia nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseOstreliya:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali ye-Australia, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena iAustralia, abatyali abafikelelekayo abafudukela eAustralia, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo mali baseAustralia, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo mali eAustralia kunye nefemi yabathengi abafikelelekayo eAustralia
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka e-Australia ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide e-Australia ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka e-Australia ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka e-Australia ukuya kumazwe angama-37.
Ukufudukela kwamashishini ngokusekwe e-Australia ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela e-Australia.
Iinkqubo zevisa zegolide eOstreliya ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi beenkqubo zotyalo-mali ukusuka e-Australia ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka e-Australia ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka e-Australia ukuya kumazwe angama-106.
Indawo yokuhlala ngoTyalo mali lwaseOstreliya ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eOstreliya ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali e-Australia, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngokuhlala kwabo ngokutyala imali e-Australia. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu e-Australia abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle e-Australia, belanda eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwabemi beAustralia ngokutyala izindlu nomhlaba eOstreliya.
Kufuneka uyazi -Ukuhlala kwakhona kwe-Australia ngoTyalo-mali
Ukuhlala kwakhona liGqwetha loTyalo-mali laseAustralia liza kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu olunesiqinisekiso sokuhlala kwakho ngempumelelo ngozaliso mali e-Australia. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuHlala kwakhona ngokuTyala imali e-Australia zibandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka e-Australia okanye e-Australia, ngokusekwe kwiziphakamiso eziza kwenziwa
Siqala ngenkuthalo ngenxa yokukhuthazeka, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngumhlali ngokutyala imali e-Australia kubaxhasi ngokufumana imvume yokuhlala e-Australia kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo efanelekileyo yase-Australia, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali e-Australia kuya kufuneka sifumane iikopi ezivavanyiweyo zepasipoti yomthengi kunye namalungu osapho.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo-mali e-Australia Amagqwetha ethu akhethekileyo oBuhlali ngokutyala imali e-Australia kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho kunye nawosapho lwakho ahlalise isicelo sotyalo-mali sase-Australia sele silungile, siya kuyizalisa ngabasemagunyeni base-Australia.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala imali e-Australia samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye izixhasi.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngoBumi ngeenkonzo zotyalo-mali e-Australia kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini e-Australia:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eAustralia azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezisuka okanye eOstreliya.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali zase-Australia azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha e-Australia okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya e-Australia.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eAustralia azinikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho e-Australia.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali eOstreliya ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuza e-Australia.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eAustralia ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya e-Australia.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeAustralia ayifumaneki kubantu baseOstreliya abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eOstreliya, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali eOstreliya ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo eOstreliya ayizizo iinkolo zonqulo kunye nokunceda kwabo e-Australia.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Ostreliya ayibonelelwa ngabantu abajongana nephonografi eOstreliya.
Indawo yethu yokuhlala amagqwetha e-Australia abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi e-Australia.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseOstreliya kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eOstreliya ukuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali e-Australia.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngoBumi obuBalaseleyo ngenkxaso yotyalo mali e-Australia kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu e-Australia.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zase-Australia, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo esihlala kuyo sisebenzisa iinkonzo zotyalo-mali zase-Australia sibonelela ngexabiso elinexabiso eliphantsi, ngezinga lempumelelo lase-Australia.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona e-Australia ukuxhasa abathengi kunye neentsapho zabo e-Australia.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali e-Australia kunye neearhente zomthetho zase-Australia ezibonelela ngenkxaso kubathengi.
Sinezona solicitors zintle kunye neearhente zenkqubo yokuphatha yase-Australia kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho e-Australia nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu e-Australia
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya i-Australia, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko, ukuhlala kwakho ngokutyala imali e-Australia kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwenzayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala kwakhona ngokuTyala imali e-Australia
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi baseOstreliya, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali yase-Australia kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa eOstreliya
Inkqubo yemvume yokusebenza e-Australia
Ukuhlala okwethutyana eOstreliya
Indawo yokuhlala eAustralia
Izindlu zoonozakuzaku kunye neAustralia
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali e-Australia kunye nezinye iinkonzo
Sibhale uluhlu lweenkonzo ezimbalwa esizibonelelayo e-Australia ngeemfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufudukela nosapho lwakho e-Australia ngokwenza utyalomali, thina njengeqabane lakho e-Australia, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo e-Australia ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala ngokubonisana notyalo-mali e-Australia, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo ze-HR nase-Australia, ongenakufumana phantsi kwesinye isambulela esinikezwe ngabaphi na abanye abacebisi base-Australia abasenza ivenkile yokumisa enye e-Australia nakwamanye amazwe e-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini e-Australia ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yethu yomthengi engaphaya kokuhlala ngokutyala imali e-Australia ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nababophelelayo e-Australia nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani e-Australia okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani e-Australia zitshiphu kunye nathi.)
Iakhawunti yeBhanki e-Australia
Nawuphi na umtyalomali ofudukela e-Australia uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho e-Australia kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eOstreliya, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula e-Australia
Ngaba ufuna ukubonisana e-Australia, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali e-Australia Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech e-Australia okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali Australia ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho e-Australia ukuqala kwangoko e-Australia.
Iinkonzo ze-HR e-Australia
yethu inkampani yezabasebenzi e-Australia inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba zengqesho e-Australia free.
Iinombolo zeFowuni eyiNene zeAustralia
Iinkqubo zeefowuni zeshishini zaseOstreliya kunye amanani virtual Australia Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali e-Australia
Accounting, ngenxa yenkuthalo e-Australia kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eOstreliya
Ukuseta ishishini e-Australia
Emva kokuhlala ngokutyala imali e-Australia, ukuseta ishishini kwi Ostreliya.
Sinikezela ngezisombululo ezisezantsi ze-IT e-Australia
Uyilo lwewebhu eOstreliya
Uphuhliso lwezorhwebo e-Australia
Uphuhliso lwewebhu e-Australia
Uphuhliso lweBlockchain e-Australia
Uphuhliso losetyenziso eAustralia
Uphuhliso lwesoftware e-Australia
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali e-Australia
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni kwezisombululo zotyalo-mali e-Australia kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, e-Australia, siziinkokheli, inkampani yethu yezomthetho e-Australia ineearhente zokufudukela e-Australia. Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu base-Australia kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali lase-Australia libonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala e-Australia, xa kuvunywa imvume yokuhlala e-Australia.
Amandla egqwetha laseAustralia ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoKuhlala kwakhona ngabaceli botyalo mali e-Australia. Ukuba use-Australia okanye uceba ukutyelela i-Australia, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani e-Australia ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla wase-Australia. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanelekile ukuba liphambuke okanye lisemthethweni kummeli waseOstreliya.
Imibuzo ebuzwa qho-Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali e-Australia
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali e-Australia?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala e-Australia ngotyalo-mali kuqoqosho lwase-Australia ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njlnjl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali e-Australia, ukuhlala kwinkqubo yenkqubo yotyalo-mali yase-Australia ixhaswe kukuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eAustralia, ngokuhlala kwethu ngokugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eAustralia, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo mali eAustralia kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo mali baseAustralia, abasebenza njengeyona ndawo yokuhlala eyiyo ngabameli botyalo mali eOstreliya, kunye neefem eOstreliya.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eAustralia | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eAustralia | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eAustralia | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali e-Australia | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali baseAustralia
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngokutyala imali e-Australia?
Ubummi ngokutyala imali e-Australia, bunokuchazwa njengokufumana ubumi base-Australia ngotyalo-mali kuqoqosho lwase-Australia ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl.njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngokutyala imali e-Australia, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yase-Australia exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali e-Australia, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali e-Australia, abemi abangcono ngamagqwetha otyalo-mali e-Australia kunye nobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali base-Australia, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eOstreliya, kunye neefem zokubonelela ngokufudukela eOstreliya
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo eAustralia | Amaxabiso afikelelekayo okungena e-Australia | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha e-Australia | Abatyali mali abafikelelekayo eAustralia | Abatyali mali abangenakufikeleleka eAustralia | Iifemu zomthetho ezingenaxabiso ezifikelelekayo e-Australia
Ithini inkcazo yepasipoti yesibini e-Australia?
Ipasipoti yesibini e-Australia, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni base-Australia ngotyalo-mali kuqoqosho lwase-Australia ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Iinkonzo zokundwendwela zesibini eOstreliya, ngamagqwetha esibini eepasipoti eOstreliya, awona magqwetha epasipoti aphezulu eOstreliya kunye nabacebisi ngeyona ipasipoti yesibini eOstreliya, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini eOstreliya, kunye neefem zokubonisana zokufudukela eOstreliya.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini e-Australia | Iiarhente zokundwendwela zesibini eOstreliya | Igqwetha lesibini lokundwendwela e-Australia | Igqwetha lesibini lokundwendwela e-Australia | Abacebisi bokundwendwela besibini e-Australia
Iyintoni inkcazo yevisa yegolide e-Australia?
I-visa yegolide e-Australia, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala e-Australia ngotyalo-mali kuqoqosho lwase-Australia ngeendlela ezahlukeneyo ezifana neebhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njalo njalo. Faka isicelo se-visa yegolide e-Australia, inkqubo yegosa yegolide ye-Australia exhaswa yi Iinkonzo zeVisa zegolide zaseOstreliya, ngamagqwetha ethu abalaseleyo egosa laseAustralia, amagqwetha egosa ahamba phambili e-Australia kunye nabacebisi abaphambili begolide baseOstreliya, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eOstreliya, kunye neefem zokubonisana zokufudukela eOstreliya.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeOstreliya | Iiarhente zevisa ezimnandi eOstreliya | Amagqwetha egosa egolide eOstreliya | Amagqwetha egosa egolide eOstreliya | Abacebisi ngevisa zegolide eOstreliya
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala e-Australia?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala imali e-Australia yi-AUD 1,500,000.
Ngaba uyayinika inkxaso yezomthetho iAustralia yokuHlala kwakhona ngokutyala imali?
Ewe, igqwetha lethu e-Australia kunye neearhente e-Australia zibonelela ngenkxaso yokuhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali e-Australia kuyabiza?
Iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala imali e-Australia kunye nokuhlala kwakhona ngokweemfuno zengxowa mali yotyalo-mali yeAustralia yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngoBuhlali ngokuTyala eAustralia, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokwenza isicelo sokuhlala ngokutyala imali e-Australia okanye i-visa yomtyali mali e-Australia?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala imali e-Australia ukusuka e-Asiya, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eAustralia usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali e-Australia usuka e-Bangladesh, Uhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia usuka e-Indonesia, Uhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia usuka eSri Lanka, Uhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia usuka eNepal, Uhlala kwakhona ngokutyala imali e-Australia usuka e-India nase-Residency ngokutyala imali e-Australia ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali eOstreliya
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngokuTyala imali e-Australia
Amagama abalulekileyo ekuhlaleni ngokuTyala imali e-Australia
Umgaqo wolawulo wasekhaya wase-Australia
I-Ofisi yeRhafu yase-Australia- www.ato.gov.au
Ulawulo lwasekhaya lweNgingqi yeNgingqi
The Umbutho wooRhulumente baseKhaya base-Australia
INkonzo yamaSiko eOstreliya - Iitshomi.tv.gov.au
Ulawulo lwaseburhulumenteni lwasekhaya lase-Australia
Ulawulo lwedolophu yaseNew South Wales
Isikhokelo sikarhulumente wasekhaya waseVictoria
Ikhomishini yemveliso http://www.pc.gov.au/
Umvuzo kunye neemeko zokusebenza - www.sairwork.gov.au
Inkonzo yolawulozidolophu yaseQueensland
Imfundo e-Australia www.demya.gov.au
ENew South Wales nsXNUMX.gov.au>
SeNorthern Territory ntv.au
WaseAustralia Capital Territory isenzo.gov.au
Isifundo e-Australia- www.studyinaustralia.gov.au
Urhulumente wase-Australia - www.eustralia.gov.au
Isebe Lezokufuduka kunye Nobumi - www.inolli.cim
Isebe Lemicimbi Yangaphandle Norhwebo - www.zizik.gov.au
Ukhenketho eAustralia - www.eustralia.com
ENtshona Koloni wa.gov.au
Ulawulo lwaseburhulumenteni eTasmania
Inkonzo yokuQiniswa kweAustralia kunye neNkonzo yokuHlola - Icandelo lezolimo.gov.au/travelling
Hlanganisa kwi ISebe loFuduko lwaseOstreliya , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko e-Australia